Cryptococcosis (မှိုတစ်မျိုးကို ရှူသွင်းမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cryptococcosis (မှိုတစ်မျိုးကို ရှူသွင်းမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါ)
Cryptococcosis ဆိုသည်မှာ Cryptococcus neoformans ဟုခေါ်သော မှိုတစ်မျိုးကို ရှူသွင်းမိခြင်း ကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာသော သူများတွင် ဤရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမှာ ရှားပါးပြီး ထိုရောဂါ သည် ကိုယ်ခံအားစနစ် ချို့ယွင်းမှု ရှိသူများတွင် ပို၍ဆိုးရွား နိုင်ပါသည်။ ထိုမှိုကူးစက်မှုကို တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Cryptococcosis က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
C.neoformans ကူးစက်ခံရမှုသည် ကျန်းမာသောသူများ တွင် အလွန်ဖြစ်ခဲပါသည်။ C.neoformans ကူးစက်ခံရမှု အ များစုသည် အထူးသဖြင့် HIV/AIDS ရှိသော ကိုယ်ခံအား စနစ် အားနည်းသူများတွင် ဖြစ်ပွားပါသည်။ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ် နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကျန်းမာသော သူများတွင် မှိုကူးစက်သော်လည်း ရောဂါ လက္ခဏာ မပေါ်ပါ။ ကူးစက်မှုသည် ကိုယ်ခံအားစနစ် အား နည်းသူများ၏ ဦးနှောက်ဆီသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ အာရုံကြော (ဦးနှောက်) ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ ဖြည်းညင်းစွာ ပေါ်လာပါ သည်။ ကူးစက်ခံရသော လူအများစုသည် ရောဂါ စစ်ဆေး အဖြေရှာသော အခါ ဦးနှောက်နှင့် ကျောရိုးအာရုံကြောမ ရောင်ခြင်း ရှိပါသည်။ အခြား ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
အမြင်ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်မြင်ရခြင်း
အရိုးနာခြင်း၊ ရင်ညွန့်ရိုး နာခြင်း
အရေပြား အကွက်များပေါ်ခြင်း။ ထင်ရှားသော အနီ ရောင်အစက်များ၊ ပြည်တည်နာများ သို့မဟုတ် အခြား အရေပြားအနာများ ပါဝင်သည်။
ချွေးပြန်ခြင်း။ ပုံမမှန်ဖြစ်သည်၊ ညဘက်တွင် အလွန် ပြန်ခြင်း။
Cryptococcosis ကို ဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဤရောဂါဖြစ်စေသော မှိုသည် Cryptococcus neoformans ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် မြေ ကြီးထဲတွင် တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ရှူသွင်းမိသော အခါ အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ရောဂါပိုးကူးစက်မှု သည် သူ့အလိုလိုသက်သာ သွားနိုင်ပါသည်။ အဆုတ်တွင် သာ ကျန်ရှိပြီး သို့မဟုတ် ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ ပျံ့နှံ့သွားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ရောဂါပိုးကူးစက်မှုသည် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်း သောသူများတွင် အများဆုံး တွေ့ရပါသည်။ Cryptococcus သည် AIDS ရှိသောသူများတွင် အသက်အန္တရာယ် ရှိနိုင် သော အဖြစ်များသည့် မှိုကူးစက်မှု ဖြစ်ပါသည်။
Cryptococcosis ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရောဂါပိုးကူးစက်မှုသည် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းသူ များတွင် မကြာခဏတွေ့ရပါသည်။ ဥပမာ-
Corticosteroid ဆေး ပမာဏများစွာ သောက်နေရ သူများ
ကင်ဆာအတွက် ဓါတုကုထုံး ခံယူနေရသူများ
Hodgkin’s disease ရှိသူများ
Cryptococcosis ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် Cryptococcus ကို ခန္ဓါကိုယ်စစ်ဆေး ခြင်း နှင့် အောက်ပါအခြားစစ်ဆေးမှုများဖြင့် အတည်ပြု အဖြေရှာနိုင်ပါသည်။
သွေးတွင် ရောဂါပိုးမွေးခြင်း (ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် နိုင်မ နိုင် သိနိုင်ရန်)
ဦးခေါင်းအား CT scan ရိုက်ခြင်း
သလိပ်တွင် ရောဂါပိုးမွေးခြင်း၊ ဆိုးဆေးဖြင့် ဆိုးခြင်း
လေပြွန်အတွင်းသို့ စကုတ်ထည့်၍ ကြည့်ခြင်း
Cerebrospinal fluid (CSF) နမူနာရရန် ကျောရိုး နာဗ်ကြောကို ဖောက်ခြင်း
Cerebrospinal fluid (CSF) တွင် ရောဂါပိုးမွေးခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် အခြားစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
Cryptococcal antigen test ( Cryptococcus neoformans မှိုမှ သွေးတွင်းသို့ ထွက်လာသော မော်လီကျူး အချို့ကို ရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်း)
Cryptococcosis ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အချို့ရောဂါကူးစက်မှုသည် ကုသရန် မလိုပါ။ သို့သော် ရောဂါကူးစက်မှုသည် မပျံ့နှံ့တော့သည်ကို သေချာရန် တစ် နှစ်ပတ်လုံး ပုံမှန် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ အဆုတ် ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်း ဖြစ်ပါက မှိုကို နိုင် သော ဆေးများ သောက်ရန် ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ ထိုဆေး များသည် အချိန်ကြာစွာသောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဆေးများမှာ-
Amphotericin B သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် Cryptococcosis ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် Cryptococcosis ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် အားနည်းနေပါက မသန့်ရှင်းသော နေရာများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင် ကြဉ်ပါ။
အဖျားတက်ခြင်းနှင့် ချောင်းဆိုးခြင်း သက်သာသည် အထိ အနားယူပါ။
အသေးစာ နာကျင်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်းများအတွက် acetaminophen သောက်ပါ။
ကောင်းမွန်သော အစားအစာကိုစားပါ။ လုံလောက် စွာ အရည်သောက်ပါ။ မအီမသာဖြစ်ကာ ပျို့အန်ချင် ပါက အစာကို နည်းနည်းနှင့် မကြာခဏစားပါ။
ရောဂါပြန်ဖြစ်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဆရာဝန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ ချိန်းဆိုမှုများကို ပြုလုပ်ပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အတွက် သင့်တော်သော အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။ Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံပြုချက်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများကို မပြုလုပ်ပေးပါ
Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 1233 Cryptococcosis Neoformans.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001328.htm. Accessed August 12, 2016. Cryptococcosis Neoformans.http://www.cdc.gov/fungal/diseases/cryptococcosis-neoformans/definition.html. Accessed August 12, 2016.Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient Advisor.Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009).The Merck manual home health handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 1233 Cryptococcosis Neoformans.https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001328.htm. Accessed August 12, 2016. Cryptococcosis Neoformans.http://www.cdc.gov/fungal/diseases/cryptococcosis-neoformans/definition.html. Accessed August 12, 2016.